Basecamp na-ebuputa ndebiri oru ngo | Martech Zone
Basecamp na-ebuputa ndebiri oru ngo
Wednesday, October 10, 2012 Douglas Karr
Ọtụtụ n'ime ihe anyị na-eme dị ka ndị na-ere ahịa bụ ugboro ugboro… site na nyocha na ịde blọgụ blọgụ, na nyocha na imepụta infographic, na-edezi ma na-ebipụta vidiyo, na-emepe ma na-eme mkpọsa ahịa. Basecamp kwukwara n'oge na-adịbeghị anya Ihe ndebiri ngo tinye ya n'ọrụ.
Na ndebiri oru ngo, ị nwere ike ịtọ ntọala ndị mmadụ na ndepụta iji rụọ ọrụ ahụ ngwa ngwa karịa.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite ọrụ site na ịmepe ndebiri ọrụ ahụ ma ị na-apụ ma na-agba ọsọ!
Anyị na-eji Basecamp kwa ụbọchị na ụlọ ọrụ anyị. Naanị otu ngwa ọrụ m chọrọ n'ezie ọ nwere bụ ndepụta ịme ihe zuru ụwa ọnụ ebe anyị nwere ike ibute ụzọ n'ọrụ anyị niile kama ịrụ ọrụ n'ime ha.
Tags: Basecamporu ngooru ngo
Tinye ihe Iframe emebi Gị Site
Ọnye na -bụ Daniel Fahrner?
Ọkt 10, 2012 na 4:38 PM
Daalụ maka ịkekọrịta Doug! Nke a dịrị na ụdị ochie nke Basecamp,
ma ọ dị ka ọ na-atọhapụ maka ụdị ọhụụ ahụ. Kedu ndị
ị na-eji? Ahụghị ọtụtụ nzaghachi dị mma na ụdị ọhụrụ ahụ.